China Diosgenin wepụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | HEX
A na-akpọ ya "ọlaedo ọgwụ" na ngalaba ọgwụ. Diosgenin bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka mmepụta nke steroid steroid. Steroid homonụ nwere ọgwụ mgbochi siri ike, ọrịa nfụkasị, mgbochi nje na ọgwụ mgbochi ọgwụ, bụ ọgwụgwọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa obi, ọrịa leukemia lymphoblastic, cellular encephalitis, ọrịa akpụkpọ, mgbochi akpụ yana ndị ọrịa dị oke mkpa maka iji ihe dị mkpa. ọgwụ ọjọọ; Ọ bụ akụrụngwa nke afọ ime Ketenolone Acetate, nke bụ etiti dị mkpa nke ọgwụ ọgwụ steroid. Enwere ike iji ya synthesize cortisol, prednisone, norethisterone, dermatolysis, dexamethasone, wdg.
Nke gara aga: Wepụ nke Radix Paeoniae Alba
Osote: Kranberị wepụ